Spider-yakaumbwa aluminium mwenje mubati chandelier Mugadziri, Fekitori, Wholesale - Zvigadzirwa - Dongguan Yisheng Electric Co, Ltd
Imba > Chandelier yekudyira > Aluminium yekudyira imba chandelier > Spider-yakaumbwa aluminium mwenje mubati chandelier
Spider-yakaumbwa aluminium mwenje mubati chandelier
Kubheka pendi / electroplating
Kubatanidzwa kweese maviri kunogumira.
-Tatu-musoro wakanangana mubatanidzwa.
Matatu-musoro disc musanganiswa.
1 mwenje inobata inotora E26 / E27, inova moto-unodzora uye murazvo-unodzora.
2ã € Mwenje wemuviri wakakomberedza uye kutenderera, uye iko kwepamusoro kurapwa kunogona kuve kwakagadziriswa kubheka varnish kana electroplating.
3ã Rudzi rumwe chete rwekushongedza kwehuni, dhizaini dhizaini, akapfuma mazinga.
Hot Tags: Spider-yakaumbwa aluminium mwenje mubati chandelier Mugadziri, fekitori, Wholesale